बलात्कारको उजुरी दिएको ४ वर्षसम्म प्रहरीले समातेको छैन आरोपितलाई :: राजु अधिकारी :: Setopati
प्रिन्सिपलले दुई वर्षसम्म बलात्कार गरेको फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरिन् विद्यार्थीले
विराटनगर, जेठ ८
आफ्नै स्कुलको प्रिन्सिपलबाट पटक–पटक बलात्कारमा परेको भन्दै एक बालिकाले प्रहरीलाई जाहेरी दिएको चार वर्षसम्म पनि बलात्कारी पक्रन प्रहरीले चासो नदिएको घटना बाहिरिएको छ।
इटहरीको ब्लुमिङ लोटस इङ्लिस सेकेन्डरी स्कुलको कक्षा ९ मा पढ्दाताका आफू प्रिन्सिपल राज खड्काबाट बलात्कारमा परेको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आइतबार सार्वजनिक गरेकी हुन्।
प्रिन्सिपल खड्काले पटक–पटक बलात्कार गरेको बताउँदै प्रहरीलाई जाहेरी दिँदा पनि अहिलेसम्म कुनै न्याय नपाएको बताएकी छन्।
सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा घटनाबारे लेख्दै पीडितले आफूले न्यायका लागि गरेको पहल सफल नभएको भन्दै दिक्दारी प्रकट गरेकी छन्।
सात वर्षअघिको घटना परिवारमा सुनाए पनि बाहिर ल्याउने हिम्मत नभएको त्यसैले प्रहरीले पनि वेवास्ता गरेको उनले बताएकी छन्।
जाहेरी दिएपनि आफूलाई पटकपटक बलात्कार गर्ने प्रिन्सिपल समात्न प्रहरीले कत्ति पनि चासो नदिएको उनले बताएकी छन्। उनका अनुसार २०७४ मा धरान प्रहरीमा जाहेरी दिए पनि प्रहरीले सधैं ‘फरार खोजिरहेको’ जवाफ दिएको छ।
यसबारे सेतोापटीले इलाका प्रहरी कार्यालय धरानसँग सोध्दा पनि फाइल बनाएर मुद्दा दर्ता भइसकेको तर आरोपित अहिलेसम्म फरार रहेको जनाएको छ।
‘२०७४ सालमै उजुरी आएपछि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरिसकेको जानकारी मैले पाएको छु’, इलाका प्रहरी प्रमुख डिएसपी बुद्ध श्रेष्ठले भने, ‘तर, मैले मिसिल सबै हेर्न पाएको छैन। म अब त्यो मिसिल हेर्नेछु।’
उनले प्रहरीको मुद्दा शाखाबाट आफूले उजुरीबारे जानकारी लिएको र अब मिसिल हेरेर थप अघि बढ्ने बताए।
तर अहिले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकबाट बलात्कारमा परेकी युवतीले भिडियो सार्वजनिक गरेपछि आफूलाई पनि बोल्ने हिम्मत बढेको उनको भनाइ छ।
पीडक राज खड्का अहिले पनि काठमाडौंमा कुनै स्कुलको प्रिन्सिपलकै जिम्मेवारीमा रहेको थाहा भएको पनि उनले बताएकी छन्। तर, स्कुलको नाम ठेगाना भने थाहा नभएको उनको भनाइ छ।
अहिले २१ वर्षकी भइसकेकी पीडितले आइतबार फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘७ वर्षअघिको घटना भएकोले बाहिर निस्कने हिम्मत थिएन तर अहिले सुस्मिताका लागि जम्मा भएको जनसमुदाय देखेर म यहाँ आशा लिएर उभिरहेकी छु, अब मेरो मुद्दा बाहिर आएको छ र बलात्कारीको पर्दाफास भएको छ।’
उनका अनुसार घटना वर्ष २०७२/७३ को आसपासको हो।
त्यसबेला उनी इटहरीको ब्लुमिङ लोटस इङ्लिस सेकेन्डरी स्कुलको विद्यार्थी थिइन्।
‘मलाई तत्कालीन प्रिन्सिपल राज खड्काले बारम्बार बलात्कार गरे। म होस्टेलमा बस्ने गर्थें र म कक्षा ९ मा थिएँ जब यो सबै सुरू भयो,’ उनले लेखेकी छन्, ‘ मलाई त्यति बेला छातीमा समस्या देखिएको थियो, मेरो उपचारको लागि मेरो बुवाले एक पटक विदेशबाट उसको (प्रिन्सिपल) खातामा पैसा पठाउनुभएको थियो, त्यसपछि उहाँले मलाई स्कुलबाट प्रिन्सिपलको साथमा सिधै अस्पताल जान भन्नुभयो। प्रिन्सिपलले मलाई अस्पताल लैजानुको सट्टा सिधै होटेलमा लग्यो।’
होटलमा पुगेपछि प्रिन्सिपलले केही खान भनेको तर आफूले नमानेको उल्लेख गर्दै उनले थपेकी छन्, ‘उसले मलाई केही खान भन्यो तर मैले मानिनँ। म डराइरहेकी थिएँ, मलाई पसिना आइरहेको थियो र उसले मलाई ‘यता आऊ यहाँ गर्मी हुँदैन’ भन्दै कोठा तिर जान भन्यो। त्यति बेला म १५ वर्षकी थिएँ।’
त्यसपछि प्रिन्सिपलले आफूलाई कोठामा थुनेको उनले बताएकी छन्।
‘उसले कोठामा थुन्यो र ताला लगायो र मलाई चाप्लुसी स्वरमा खाना खान भन्यो, मैले फेरी मानिनँ। त्यसपछि उसले मेरो स्कुलको ड्रेस च्यात्यो र मलाई बलात्कार गर्‍यो।’
यो सबै घटनाको भिडियोसमेत बनाएको पीडितले बताएकी छन्।
‘उसले मलाई ब्ल्याकमेल गर्न प्रत्येक पटक त्यो भिडियो प्रयोग गर्‍यो। यो क्रम मेरो एसईईसम्म (२ वर्ष सम्म) जारी रह्यो। बाथरूम, साइन्स ल्याब, कम्प्युटर ल्याब, अफिस, होस्टेल कोठा, जहाँसुकै जहाँ पनि उसले मलाई बलात्कार गर्थ्यो,’ उनले भनेकी छन्, ‘उसले मलाई विदामा पनि घर जान दिएन, घर गयो भने मेरो पढाइ खस्किन सक्छ त्यसैले होस्टेलमा बस्नु राम्रो हुने भनी मेरो घरका मानिसलाई सम्झाउँथ्यो।’
उनले बुबाले प्रिन्सिपलको खातामा पैसा पठाउनुको कारण बारे भनेकी छन्, ‘छोरी राम्रो पढ्दै छे र उसको लागि घर नजानु नै राम्रो हो भन्दै मेरा अभिभावकलाई यसरी गलत विश्वास दिलायो, त्यही भरोसाको कारण मेरो बुवाले उसको खातामा पैसा पठाउनु हुन्थ्यो।’
प्रिन्सिपलले आफूलाई घर जान नदिने, आमाबुवाले उसको कुरामा विश्वास गरेर सधैँ होस्टेलमै बस्न दिने गरेको पनि उनले लेखेकी छन्।
‘मेरी आमा स्कुलबाट ५ मिनेट टाढा बस्नु हुन्थ्यो र पनि मलाई प्रिन्सिपलले नै अस्पताल लैजान्थ्यो, यो सब फिल्मी जस्तो सुनिन्छ नि होइन? तर यो मेरो जीवनको वास्तविक कथा हो,’ उनले लेखेकी छन्, ‘मैले मेरा साथीहरूलाई भएका हरेक घटनाहरू भनेकी थिएँ तर कसैले पत्याएनन्। म बाल्यकालदेखि नै हकी स्वभाव र बोल्ने खालको थिएँ, त्यसैले सबैले मेरो चरित्रलाई नै दोष दिन्थे, म पीडित हुँ भनेर कसैले विश्वास गरेनन्, कसैले मेरो पक्षमा अडान लिएनन्। म मेरो युद्धमा एक्लै थिएँ। मैले यो कुरा प्रिन्सिपलकी श्रीमतीलाई पनि भने तर उनले पनि मेरो लागि बोलिनन्। मैले स्कुलमा ३ पटक (२ वर्ष भित्र) आत्महत्या गर्ने असफल प्रयास गरें। न म मरे, न मेरो समस्या समाधान भयो।’
उनले एसईई सकेपछि परिवारलाई यो कुरा भन्ने हिम्मत जुटाएको तर न्याय भने नपाएको बताएकी छन्।
‘त्यो बलात्कारी फरार भयो र मेरो मुद्दा अझै चलिरहेको उनीहरू बताउँछन्। जब म फलोअप गर्थेँ, प्रहरीले कहिले बलात्कारीलाई खोज्दै छौं भन्छ। घटना भएको ७ वर्ष भइसक्यो तर बलात्कारी कहाँ छ? अन्तिममा मैले न्याय पाउने आशा गुमाएँ र प्रहरीलाई फलोअप गर्न छोडेँ,’ उनले लेखेकी छन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ८, २०७९, ०९:४२:००